ခြောက်သွေ့တဲ့ဆံသားတွေကို ထိန်းသိမ်းနည်းအဆင့်ဆင့် - For her Myanmar
ပိုးသားလေးလို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းတဲ့ ဆံကေသာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့
ယောင်းတို့ရေ … ဆံပင်ကို ကောက်လိုက်ဖြောင့်လိုက်ဆေးဆိုးလိုက်နဲ့ အမျိုးမျိုးပုံသွင်းတာများလာတဲ့အလျောက် ဆံသားခြောက်သွေ့တာကလည်း ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီလေ။ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ဆံသားတွေကို ဒီထက်အခြေအနေပိုမဆိုးရလေအောင် ဒီအဆင့်လေးတွေအတိုင်း ထိန်းသိမ်းပေးလို့ရပါတယ်။
(၁) ရေအေးအေးနဲ့ ခေါင်းလျှော်ပါ။
ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါ ဘယ်တော့မှ ရေပူမသုံးပါနဲ့။ ရေပူက ဦးရေပြားကို ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်စေပြီး ဆံပင်တွေကို ကြွပ်ဆတ်စေလို့ပါ။
Related article >>> ဒီနှစ်ထဲမှာ ပြန်ခေတ်စားလာနိုင်တဲ့ ၉၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ဆံပင်ပုံစံ (၅) မျိုး
ဆံကေသာကို ပျော့ပျောင်းနူးညံ့စေပြီး ရေဓာတ်အပြည့်အဝရစေဖို့ ဆံပင်ပျော့ဆေး (conditioner) သုံးပြီး အနည်းဆုံး သုံးမိနစ်လောက်ထားပေးပါ။ ဆံပင်ပျော့ဆေးသုံးတဲ့အခါ ဦးရေပြားကို မထိစေဘဲ ဆံပင်အဖျားတွေမှာပဲ သုံးပေးရပါမယ်။
(၃) အပူချောင်းတွေသုံးပြီး ပုံသွင်းတာတွေရပ်ပါ။
ခြောက်သွေ့နေတဲ့ဆံပင်လေးတွေကို အပူချောင်းတွေနဲ့ ပုံသွင်းပြီး ရက်စက်တော့မလို့လား ယောင်းရယ်။ စဉ်းစဉ်းစားစားလည်း လုပ်ပါဦး။ အပူဒဏ်နဲ့တွေ့ရင် နဂိုကမှ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ဆံပင်က ကျိုးကြေပြီး ပျက်စီးရုံပဲရှိတာမို့ Dryer နဲ့မှုတ်ရင်တောင် အပူအနိမ့်ဆုံးထားပြီး မှုတ်ပါနော်။
Related article >>> ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေတဲ့ ဆံကေသာအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဆီကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ?
မိန်းကလေးတော်တော်များများက ဆံပင်ကိုဆီထည့်ာမယ်ဆိုရင် လက်တွန့်တတ်ကြတယ်လေ။ Stella အပါအဝင်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အုန်းဆီက ဆံပင်ကို ပျော့ပျောင်းပြီး အရှည်မြန်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပျက်စီးနေတဲ့ဆံပင်တွေကိုလည်း အမြန်ဆုံးပြုပြင်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။အုန်းဆီကို သုံးချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အနံ့ကြီး မကြိုက်လို့ဆိုရင် အုန်းဆီကို အခြေခံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။
ခြောက်သွေ့တဲ့ဆံကေသာရဲ့ အဖျားလေးတွေက ကြွပ်ဆတ်နေတတ်ပြီး ဆံပင်အရှည်နှေးစေတာကြောင့် ပျက်စီးနေတဲ့အဖျားလေးတွေကို တစ်လတစ်ခါပုံမှန်ညှပ်ပေးပါ ယောင်းရေ။
ဒါကတော့ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ဆံသားပိုင်ရှင်ယောင်းလေးတွေ လိုက်နာရမယ့် ဆံကေသာထိန်းသိမ်းနည်းအဆင့်ဆင့်ပါ။ လွယ်လွယ်လေးမို့လို့ ယောင်းတို့ကျေနပ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော် …
Stella (For Her Myanmar)
ပိုးသားလေးလို နူးညံ့ပြော့ပြောငျးတဲ့ ဆံကသောကို ပိုငျဆိုငျနိုငျဖို့
ယောငျးတို့ရေ … ဆံပငျကို ကောကျလိုကျဖွောငျ့လိုကျဆေးဆိုးလိုကျနဲ့ အမြိုးမြိုးပုံသှငျးတာမြားလာတဲ့အလြောကျ ဆံသားခွောကျသှတေ့ာကလညျး ပွဿနာတဈခုဖွဈလာပွီလေ။ ခွောကျသှနေ့တေဲ့ ဆံသားတှကေို ဒီထကျအခွအေနပေိုမဆိုးရလအေောငျ ဒီအဆငျ့လေးတှအေတိုငျး ထိနျးသိမျးပေးလို့ရပါတယျ။
(၁) ရအေေးအေးနဲ့ ခေါငျးလြှျောပါ။
ခေါငျးလြှျောတဲ့အခါ ဘယျတော့မှ ရပေူမသုံးပါနဲ့။ ရပေူက ဦးရပွေားကို ရဓောတျခမျးခွောကျစပွေီး ဆံပငျတှကေို ကွှပျဆတျစလေို့ပါ။
Related article >>> ဒီနှဈထဲမှာ ပွနျခတျေစားလာနိုငျတဲ့ ၉၀ ခုနှဈဝနျးကငျြက ဆံပငျပုံစံ (၅) မြိုး
ဆံကသောကို ပြော့ပြောငျးနူးညံ့စပွေီး ရဓောတျအပွညျ့အဝရစဖေို့ ဆံပငျပြော့ဆေး (conditioner) သုံးပွီး အနညျးဆုံး သုံးမိနဈလောကျထားပေးပါ။ ဆံပငျပြော့ဆေးသုံးတဲ့အခါ ဦးရပွေားကို မထိစဘေဲ ဆံပငျအဖြားတှမှောပဲ သုံးပေးရပါမယျ။
(၃) အပူခြောငျးတှသေုံးပွီး ပုံသှငျးတာတှရေပျပါ။
ခွောကျသှနေ့တေဲ့ဆံပငျလေးတှကေို အပူခြောငျးတှနေဲ့ ပုံသှငျးပွီး ရကျစကျတော့မလို့လား ယောငျးရယျ။ စဉျးစဉျးစားစားလညျး လုပျပါဦး။ အပူဒဏျနဲ့တှရေ့ငျ နဂိုကမှ ခွောကျသှနေ့တေဲ့ဆံပငျက ကြိုးကွပွေီး ပကျြစီးရုံပဲရှိတာမို့ Dryer နဲ့မှုတျရငျတောငျ အပူအနိမျ့ဆုံးထားပွီး မှုတျပါနျော။
Related article >>> ခွောကျသှပေ့ကျြစီးနတေဲ့ ဆံကသောအတှကျ အသငျ့တျောဆုံးဆီကို ဘယျလိုရှေးခယျြမလဲ?
မိနျးကလေးတျောတျောမြားမြားက ဆံပငျကိုဆီထညျ့ာမယျဆိုရငျ လကျတှနျ့တတျကွတယျလေ။ Stella အပါအဝငျပေါ့။ ဒါပမေဲ့ အုနျးဆီက ဆံပငျကို ပြော့ပြောငျးပွီး အရှညျမွနျစပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ပကျြစီးနတေဲ့ဆံပငျတှကေိုလညျး အမွနျဆုံးပွုပွငျပေးနိုငျပါသေးတယျ။အုနျးဆီကို သုံးခငျြတယျ။ ဒါပမေဲ့ အနံ့ကွီး မကွိုကျလို့ဆိုရငျ အုနျးဆီကို အခွခေံထုတျလုပျထားတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို သုံးပေးနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ – Parachute Advansed လိုမြိုး အုနျးဆီကို အခွခေံထုတျလုပျထားပွီး အုနျးဆီနံ့ပွငျးပွငျးမပါတာမြိုးပေါ့..
ခွောကျသှတေဲ့ဆံကသောရဲ့ အဖြားလေးတှကေ ကွှပျဆတျနတေတျပွီး ဆံပငျအရှညျနှေးစတောကွောငျ့ ပကျြစီးနတေဲ့အဖြားလေးတှကေို တဈလတဈခါပုံမှနျညှပျပေးပါ ယောငျးရေ။
ဒါကတော့ ခွောကျသှနေ့တေဲ့ ဆံသားပိုငျရှငျယောငျးလေးတှေ လိုကျနာရမယျ့ ဆံကသောထိနျးသိမျးနညျးအဆငျ့ဆငျ့ပါ။ လှယျလှယျလေးမို့လို့ ယောငျးတို့ကနြေပျကွမယျထငျပါတယျနျော …
Tags: Beauty, damage hair, dry, Hacks, hair, hair care, tips
ပျော်စရာလည်းကောင်း၊ ဗဟုသုတနဲ့ လက်ဆောင်တွေလည်း အများကြီး ရခဲ့ရတဲ့ For Her Myanmar ရဲ့ "Her Beauty, Her Choice" Event
Plus size မမတို့လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ ဖက်ရှင်အလွဲ (၅) ခု
Stella June 4, 2019
ပရိုမိုးရှင်းပစ္စည်းထဲမှာမှ အကောင်းဆုံးပစ္စည်းကို ဘယ်လိုရွေးထုတ်ကြမလဲ?
Hnin Ei Oo July 5, 2019
အသက်(၄၀) အရွယ်မမတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဆံပင်စတိုင်လ် (၅) မျိုး
Stella June 12, 2019